Human Rights Watch: “Dowladda iyo Maleeshiyadda waxay cabsi geliyaan Suxufiyiinta” | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Human Rights Watch: “Dowladda iyo Maleeshiyadda waxay cabsi geliyaan Suxufiyiinta”
Iyadoo ay maanta ku beegan tahay Maalinta Xorriyadda Saxaafadda Caalamka “World Press Freedon Day” ayaa waxaa lagu sheegay inay Suxufiyiinta Soomaaliyeed la kulmaan Tacadiyo iyo Caburin lagu hayo Saxaafadda Madaxa Bannaan.
Hay’adda Human Rights Watch waxay sheegtay in Dowladda Federalka iyo Alshabaab adeegsadanayaan Xeelado ay ku hor joogsanayaan Dhaqdhaqaaqa Warbaahinta Madaxa Bannaan.
Warbixinta Human Rights Watch soo saartay oo ka kooban 74-Bog ayaa waxaa Cinwaan looga dhigay “ Sidii Kalluun ku dhex jira Biyo sumeysan” Weerarka lagu hayo Xorriyadda Warbaahinta Somalia”.
Dukumentiyadda dilalka, cabsi-gelinta iyo xirista aan sharciga lahayn ee lagu hayo Suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay soo taxnayd tan iyo sannadkii 2014-kii.
Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedyadda waxay siyaabo kala duwan ugu adeegsadeenxeelladaha lagu caburinayo, laguna waxyeelaynayo Suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Xeeladaha cabsi-gelinta Suxufiyiinta Soomaalida ee ay Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedyaadda adeegsadaan waxaa ka mid ah xariga Suxufiyiinta, Warbaahinadda Madax-bannadda ee sida xoog leh albaabadda loogu laabayo iyo in Dembiyo lagu soo oogo.
Warbixinta Hay’adda Human Rights Watch waxaa kaloo lagu xusay inay Alshabaab beegsadaan Suxufiyiinta, taasi oo qeyb ka ah Ololahooda lidka ku ah Dowladda Somalia iyo Tebinta Wararka aysan la dhacsanayn.
Madaxda Dowladda waxay ku fashilmeen in si dhab ah loo baaro falalka lagu dilayo Suxufiyiinta iyo in la soo maxkamadeeyo kuwa ka mas’uulka ah Caburinta iyo inay Suxufiyiinta ku noolaadaan si cabsi leh.
Hay’adda Human Rights Watch waxay kaloo ugu baaqday Dowladda Federalka inay qaadaan Tallaabooyinka lagu joojinayo cabsida iyo rabshadaha ka dhanka ah Suxufiyiinta ee ay ku kacaan Ciiddanka Ammaanka iyo kuwa Alshabaab.
“Somalia waxay u baahan tahay Warbaahin Madax bannaan oo Nashaad leh oo muhiimad gaar ah u leh iftiiminta Dadaalka Doorashadda la qorsheeyey inay dhacaan sannadkan 2016-ka” ayaa lagu sheegay Warbixintaas.
Waxaa kaloo lagu xusay inay Alshabaab, Dowladda Federlka iyo Isbahaysigooda doonayaan inay ka faa’ideystaan Habacsanaanta jirta ee ka dhalatay colaadaah sannooyinka badan ka socda Somalia.
Warbixinta waxaa kalaoo lagu muujiyey inay labada dhinac ku khasbaan Suxufiyiinta inay baahiyaan Wararkooda, Cabsi-gelinta War-tebinta, taasi oo dhibaato xooggan u geysanayso Deegaanka Warbaahinta.
Tobaneeyo Suxufiyiin oo ka cararay Somalia ayaa masaafuris ugu nool in ka badan 10-sanno.
Warbixinta Human Rights waxaa kaloo lagu xusay inay Alshabaab tahay cabsida ugu weyn ee haysta Warbaahinta, iyadoo Suxufiyiinta weeraro kaaga yimaadaan Jilayaasha Dowladda iyo kuwa aan ka tirsanayn Dowladda.
Human Rights waxay sheegtay inay wareysteen 50 Suxufiyiin, Tifaftirayaal iyo Agaasimayaal Warbaahineed oo ka hawlgala Goballadda Koonfurta, Bartamaha iyo Puntland.
Tan iyo sannadkii 2014-kii waxaa Somalai lagu dilay 10 Saxafi, iyadoo 6 kalena ka badbaadeen Shirqool lagu dili lahaa, halka kuwo kalena la dhaawacay iyagoo warar tebinayo.
Tobaneeyo Suxufi ayaa si sharci darro loo xiray, kuwo lagu qabtay gacan adag oo Maxkamadeed, halka tiro badan ay farriimo cabsi-gelin ah loogu soo diray Telefoonkooda ama Farriimaha Kooban ee SMS loogu soo diray, iyagoo looga digay inay bedelaan waxa ay baahinayaan ama ay la kulmi doonaan cawaaqib-xumo.
Warbixinta Human Rights Watch kaga hadleen Xorriyadad Saxaafadda Somalia ayaa waxaa la soo xigtay Saxafi ka badbaaday weerar ku qabsaday Muqdisho bishii October ee sannadkii 2014-kii.
Weerarkaasi waxaan shaki ku jirin inuu ahaa mid si toos loogu beegsaday Weriyahaasi oo sheegay inuu maqlayey dhowr cod oo ninkii toognayey ku oranayo: “Weli waa nool yahay!” iyo si xun ayuu u dhaawacmay, kumana sii shaqeysan karo Xirfadda Saxaafadda”.
Dhinaca kale, Warbixinta Human Rights Watch waxaa lagu soo qaatay Tallaabadii uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku saxiixay bishi iJanaayo ee sannadkan 2016-ka Sharciga cusub ee Saxaafadda, oo waxyeello ba’an u geysanayo Xorriyadda Hadalka.
Human Rights Watch waxay xustay inkastoo Sharcigaasi ku jiraan qoddobo dhowr oo wanaagsan, haddana waxaa ku jira Sharcigaasi wax badan oo xayiraad dheeraad ku ah Xorriyadda Warbaahinta, sida Faaf-reebka iyo in Suxufiyiinta fal-dembiyeed looga dhigo Wararka ay tebinayaan.
Previous: Ciiddanka Puntland oo la wareegay Hoygii Sh. C/qaadir Muumin ka deganaa Buuraha Galgala
Next: Spectrum ASA has successfully completed the acquisition of 2D seismic data offshore south Somalia